Anyi gosiputara na mmasi banyere ahia ahia n’eto! | Martech Zone
Ndị na-ege anyị ntị na-eto eto. Ọ bụghị ntakịrị dịka ọ ji nwayọ mee afọ iri gara aga. Ọ na-eto eto kwa ọnwa ka ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ejupụta na mkpebi ndị ekwesiri ime teknụzụ ahịa.
Martech Zone emeela ka o rute nso Afọ 40% karịa afọ… Nkezi ihe karịrị 100,000 na-eleta kwa ọnwa yana ~ 75,000 ndị debanyere aha email (ugbu a anyị gara n'ihu CircuPress - email ikpo okwu anyi wuru maka WordPress). Nke anyi Twitter, Facebook, Google+ na onye akaụntụ gaa n'ihu na-aza kwa. Ngwa mkpanaka anyị na-eto na pọdkastị anyị jikọtara na Edge nke redio weebụ eruola ihe karịrị 3,000,000 na-ege ntị na afọ ole na ole gara aga. Chaị!
N'oge na-adịbeghị anya Venture Beat mere ihe pụrụ iche na steeti ego na ụlọ ọrụ teknụzụ ahịa.
Ozi ojoo ahu bu na agbanyeghi ihe ruru $ 49.1 ijeri ego gbasasiri n'etiti 537 ahia teknụzụ ngwaahịa ndị natara nnukwu ego, ntinye nke ngwaahịa 25 ahịa teknụzụ gafere oke ọrụ 151 bụ pasent 4.1. Nke ahụ ga-abụ isi, n'ezie, n'èzí Silicon Valley afụ.
Ọ naghị akwụsịlata, kwa. Scott Brinker na-akọ ihe karịrị $ 21.8 ijeri nke ego maka ahịa technology… Nke pụtara igwe na akụrụngwa na teknụzụ dị n'akụkụ!
Gịnị mere mmụba ji na-aba ụba?
nchọpụta - ụlọ ọrụ na-emepụta ihe ngwọta na-amalite iwulite ngwaọrụ ndị bara uru na-enyere ụlọ ọrụ aka n'ezie igbakwunye ma tụọ mbọ ahịa ha. Chọta ngwaọrụ ndị kwesịrị ekwesị - yana nnukwu nhọrọ dị ka VB kwuru n'elu, siri ike.
nhọrọ - enwere otutu puku ngwọta n’ebe ahụ! Echeghị m na ọ bụ ihe ijuanya na ọdịdị ala dị larịị ma saa mbara. Ndị ụlọ ọrụ nwere ohere ịchọta nyiwe na-egbo mkpa ha karịa ịzụrụ otu ihe ga-eme ka ha gbanwee usoro ha.
price - ọnụahịa maka IT adaala mana ahịa teknụzụ ahịa ka dị otu ma ọ bụ mụbaa. Nke ahụ bụ ntakịrị afụ n'echiche m, anyị na-ekiri ma na-ekerịta ọtụtụ ngwaọrụ ọhụụ, ndị dị ọnụ ala bụ ndị bara ọgaranya ma nwee nnukwu asọmpi na nyiwe ndị dị ugbu a, ndị agadi na ọnụ.
Ala nke iji - Ọ bụrụ na ị zụrụ usoro ịzụ ahịa ahịa ahịa afọ ole na ole gara aga, ịkwesịrị itinye ego na ndị ọrụ nchịkwa nke ukwuu iji kesaa ma jikwaa azịza ya. Ọ bụghị nke ukwuu ọzọ. Ihe ngwọta ọhụrụ na-adịwanye mfe iji ma tinye, ya mere, ụlọ ọrụ na-emeghe itinyekwu ego n'ime oghere n'ihi na ọ dịghị ihe mgbochi dị oke ọnụ ịbanye.
Ya mere, gịnị na-efu?
Emeela m ihe atụ ahụ na ire ere teknụzụ dị ọtụtụ dị ka ịre ndị friji ka ndị agụụ na-agụgbu. Ndị friji ahụ dị ọnụ ala, hie nne, nwee ọgaranya ma nwekwaa ezigbo ọrụ. Ma ha abaghị uru ma ọ bụrụ na ịnweghị nri. Na nri nke teknụzụ ahịa bụ atụmatụ na ọdịnaya dị mkpa iji mee ka azụmahịa gị baa uru.
N'ihi na teknụzụ azụmaahịa adịla ọnụ ma baa ụba, a nabatara ya ebe niile mana anaghị etinye ya n'ọrụ. Afọ iri gara aga, ngalaba na-ere ahịa ga-enwe atụmatụ ọtụtụ afọ na akụrụngwa mmadụ na-ezube na ịzụ ahịa teknụzụ igodo ọ bụla. Ọtụtụ ụlọ ọrụ ugbu a na-ebuga teknụzụ na-enweghị usoro, ma ọ bụ n'ọnọdụ usoro. Na stof nke ahụ na-eresị na ndị ụlọ ọrụ na-dị nnọọ enyere ogbenye marketers iji gbasaa ihe unyi nke na-adịghị na-arụpụta.
Anyị kwesịrị ịgbanwe nke ahụ! Dịka mbipụta na teknụzụ azụmaahịa, anyị agbadoro anya na-agbanwe na afọ gara aga. Mgbe ụlọ ọrụ na-eme anyị n'oge a, anyị na-eguzogide ide banyere ihe ngwọta ha belụsọ na anyị nwere ozi na-enye nsogbu ndị bụ isi ha na-anwa imeri yana ụdị usoro achọrọ iji dozie ihe ịga nke ọma. Ọ bụghị maka atụmatụ, ọ bụ maka uru.
Yabụ kedu ihe na-esote?
Anyị na-adịghị na-eguzo ka na anyị na-etinye a ton nke oge na mgbalị n'ime anyị azum inyere gị aka… ebe a bụ ihe na-abịa gburugburu akụkụ:
Redesign saịtị - Anyị nwere redesign nke blog na-abịa na anyị ga-eji nwayọọ nwayọọ webata. Ọ ga-eme ka anyị dị ka a mbipụta dijitalụ karịa a blog, e mere site na onye ọrụ interface na imewe ọkachamara na 31zọ ọpụpụ XNUMX. Ana m etinye nhụchalụ n'okpuru!
Ọdịnaya Ọdịnaya - anyị na ndị ọrụ na teknụzụ na - arụkọ ọrụ ọnụ Nweta Atomic iji mezie ọdịnaya anyị ma mee ka ndị na-agụ akwụkwọ anyị nwee njikọ. Anyị nwekwara ezigbo mmekọrịta anyị na ndị na - ede kọọpị na - achọ ịmụba iji nyere anyị aka melite ọdịnaya anyị.
Ndota Ndu - Anyị nwere ọtụtụ ndị na - agụ akwụkwọ chọrọ enyemaka ma amaghị ebe ha ga - atụgharị. Ntughari anyi gunyere inwe udi ichikota na uzo esi ekesa ya na uzo obula. Chọrọ enyemaka ma ị ga - enwe ike ịrịọ maka ya - agakwuru ndị otu anyị ma ọ bụ otu n'ime ndị mmekọ anyị.
Podcast - Anyị na-arụ ọrụ iji nweta ọtụtụ ndị ọzọ ụlọ ọrụ ọkachamara na ahịa na anyị na Podcast na oké folks na Atụmatụ saịtị. Anyị ga-arụ ọrụ ka mma nke ịkwalite ihe ngosi site na saịtị anyị na mmemme email. Podcast na-erute ọtụtụ mmadụ, anyị kwesịrị ịrụ ọrụ ka mma nke ịgbanye ya na saịtị na ngwa anyị.
Mobile App - O di nwute, ụlọ ọrụ ngwanrọ nke wuru ngwa anyị na-emechi akụkụ nke azụmahịa ha, yabụ anyị ga-arụ ọrụ na injinia ngwa ọhụrụ maka afọ ọhụrụ nke gụnyere mgbasa ozi na ibute njide dịka saịtị anyị si eme.
webinars - Anyị hụrụ ndị ahịa anyị n’anya Njikere, Ma na-arụ ọrụ ịzụlite webinars maka gị kwa ọnwa iji nyere gị aka na azụmahịa gị na ahịa mkpa teknụzụ!
Ihe - N'afọ gara aga, anyị nwere ihe ịtụnanya na obodo Indianapolis nke dọtara ndị bịara 250 ka ha wee nweta ego maka ọrụ ebere. Anyị ga-agbaso ịme ihe omume ka ukwuu ebe a na Indianapolis - ọkachasị ebe ọ bụ na Salesforce na-eme ogbako Mkparịta ụka ya na New York. Anyị ka kwenyere na ohere dị ịtụnanya dị ebe a maka nzukọ ahịa na teknụzụ midwest. Ememme egwu anyị jikọtara bụ ezigbo mgbakwunye!
Video - anyị malitere Obere vidiyo ahia ma na --ejikọkọta Pọdkastị anyị yana iwepụta mmiri iyi oge niile iji nyere ndị na - agụ akwụkwọ anyị aka.
Anyị na-anwa ịhazi na ịrụ ọrụ nso na ndị ọrụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ nọ ebe ahụ, dịka Social Media Examiner, na Ụlọọrụ Marketing Content, DetuoBlogger, AzụmaahịaProfs, Azụmaahịa, Ọhụrụ Media Expo, Onye isi ahia ndi ahia, na mkpakọrịta dị iche iche. Ndi otu a nwere ihe omumu ihe omumu, omuma, nzuko ntaneti, na ihe omume nke anyi choro iji kwado ma kwalite ndi obodo anyi.
Site na ụlọ ọrụ, DK New Media abụrụla onye elebara anya nke ukwuu, na-arụ ọrụ naanị yana nyiwe azụmaahịa, ụlọ ọrụ azụmaahịa, ndị na-ahụ maka teknụzụ azụmaahịa na ụlọ ọrụ teknụzụ na 2014. Jenn Lisak (ugbu a a onye) na m na-pushing Marketing Technology ika n'ime Chakwasa ihie na mbenata visibiliti nke DK New Media.
M kwuru banyere nrụzigharị? Nke a bụ ọnụ ọgụgụ ezoro ezo. Ọ ga-azacha nke ọma ka anyị wee nwee ike melite ahụmịhe nke ndị ọrụ ekwentị mkpanaka anyị na-eto eto kwa ụbọchị! Emebere ibe saịtị ahụ niile ma ndị mmepe amalitela ọrụ!
Tags: eburu atomndozi ọdịnayaỤlọọrụ Marketing Contentoyiriiheụzọ ọpụpụ 31ndu nduahia ahia ahia ahiaogbako ahiaAhịa Podcastteknụzụ ahịamkpakọrịta teknụzụ ahịablog teknụzụ ahịawebinars ahịaahia ahiaAzụmaahịamidwestmobile ngwamtmwọhụrụ media exporedesignusoro saịtịSocial Media Examinerwebinars
Ọkt 5, 2014 na 8:44 AM
Ọ dị mma ịbụ akụkụ nke nkwurịta okwu na-aga nke ọma nke Marketing Tech Bog. Ọ bụ afọ dị ukwuu nke uto na mmekọrịta, anyị nwekwara obi ụtọ maka atụmatụ anyị maka ọdịnihu. Ihe ịga nke ọma nke blọọgụ gị bụ ihe akaebe maka itinye uche gị, Doug. Obi ụtọ na m ga-agbachi gị ụkwụ ka anyị na-enwu ọkụ na-ere ahịa dijitalụ na ezi ozi!
Ezem Iwuike (@ikechukwu_nweke)
Ọkt 16, 2014 na 9:57 AM
Ekele Doug! Obi abụọ adịghị ya na ị nọ na mbara igwe dị ọkụ, na ndị ọrụ furu efu mgbe ọ na-abịa buru ngwá ọrụ kwesịrị ekwesị maka mkpa ha. Also na-na na ntụpọ na na ngwa nju oyi ntụnyere, hụrụ ya n'anya 🙂